कोरोना संक्रमणबाट बाँचौं र बचाऔं : RajdhaniDaily.com -
Home Editor-Picks कोरोना संक्रमणबाट बाँचौं र बचाऔं
कोरोना संक्रमणबाट बाँचौं र बचाऔं
सामाजिक सञ्जालमा विगत केही दिनदेखि भ्रम फैलाउने कुरा प्रकाशित भइरहेका छन् । जस्तै : कोरोना केही होइन । यसले केही गर्दैन । मास्क लगाउनुहुँदैन । यो लगाउँदा हानि गर्छ । यस्ता यावत् कुरा दिनहुँ युट्युबमा या अन्य मिडियामार्फत सुनिरहेका छौं । यस्ता कुरामा कुनै सत्यता छैन । हो लकडाउन थप्नुहुँदैन । अब यो कोरोनामा कसरी आफ्नो रोजगार व्यवसाय चलाउने यो सिक्दै जाने कुरा हो । हामी सबैलाई थाहा छ । कोरोना भाइरस त छ, यसले कसैकसैलाई बिरामी बनाउँछ । त्यस्ता बिरामीलाई आईसीयूको जरुरत पनि पार्न सक्छ । हामीलाई कोरोनाको लक्षण छैन भन्दैमा अरूलाई यसले केही गर्दैन भन्ने त अवश्य होइन नि ।
हाम्रो कर्तव्य भनेको अरूलाई बचाउने हो । हामीलाई लागिहाल्यो भने पनि हाम्रो कारण अरू संक्रमित नहोऊन् । यो हाम्रो प्रमुख दायित्व हुनुपर्छ । यो कोरोना जति धेरै मानिसलाई लाग्छ, उति मृत्यु दर बढ्न सक्छ । मृत्यु हुनेमा हाम्रा आफन्त या हामी आफैं पनि त हुन सक्छौं । भिडभाड धेरै मानिस भएको ठाउँमा धेरै देखिन सक्छ । त्यसैले, ठूलाठूला सहरमा यसको प्रकोप बढ्न सक्छ । बाहिर देशमा यस्तो छ, यसो गरे भनेर भनिरहँदा हाम्रो देशमा के छ ? हामीसँग कति जोहो छ ? कति तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी छन् ? आदि आदि कुराबारे सोच्नु जरुरी छैन र ?
आफू निको भएपछि हामीले दिएको थोरै रगतले यदि कसैको जिन्दगी बच्दछ भने किन नदिने प्लाज्मा
आज यतिका महिना लकडाउन गर्दा पनि हाम्रो तयारी के भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर समयले बताइसक्यो । यतिका दिनमा न कुनै अस्पताल को जोहो गरियो, न भेन्टिलेटरको संख्या बढाइयो । तर, सधैं सरकारलाई मात्र दोष दिने ? हामी नागरिकले गर्नु पर्ने कर्तव्य के हो ? यो कहिले सोचेका छौं ? जथाभावी हिँड्ने, मास्क नलगाउने, चिया पसलमा गफ चुटेर बस्ने, यस्तो कोरोनाको बेला पनि भोजभतेर, सभा, गोष्ठी, पूजाआजा आदि गरेर मानिस जम्मा हुने के यही हामी नागरिक को दायित्व हो ? नानाथरी कुरा नसुनी आफ्नो काम गर्नुहोस् । जसलाई कोरोना लाग्छ या जसको परिवारमा कोरोना हुन्छ र लक्षण पनि देखिन्छ, बज्रपात त उसलाई र उसको परिवारलाई प-यो होइन र ?
त्यसैले, एक चिकित्सकको नाताले भन्छु, कृपया, सामाजिक दूरी कायम गर्नुहोस् । बाहिर जाँदा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्नुहोस् । साबुनपानीले या स्यानिटाइजरले हात सफा गर्नुहोस् । जहाँ साबुनपानी छ भने योभन्दा राम्रो अर्को केही छैन । आफ्नो घर आफन्त छर छिमेकी हुन उहाँहरूलाई त कोरोना छैन होला भन्ने भ्रम कहिल्यै नपाल्नुहोला । कोरोना जसलाई पनि हुन सक्छ, उहाँलाई लक्षण छैन । तर, तपाईंलाई हुन पनि सक्छ । जसलाई कोरोना लागेर निको भइसक्नुभएको छ, कृपया अरूलाई बाँच्न सहयोग गर्नुहोस् ।
कोरोनाजस्तो महामारीमा हामी सबै साथ रहेर सँगै यो रोगसँग लड्ने हो । हाम्रो कर्तव्य भनेको संक्रमण अझ फैलन नदिने हो । यो रोग को उपचार त छैन । त्यसैले, यसको रोगथाम नै उत्तम उपाय हो । आज कति जना मानिस कोरोना लागेर पनि निको भइसक्नुभएको छ भने कतिजना कोरोनाको संक्रमणले ग्रसित भएर अस्पतालको शøयामा छटपटाइरहनुभएको छ । के हाम्रो कर्तव्य बन्दैन कि जो अझै निको हुनु भएको छैन, उहाँलाई सहयोग गरौं । आफू निको भएपछि हामीले दिएको थोरै रगतले यदि कसैको जिन्दगी बच्दछ भने किन नदिने प्लाज्मा । त्यसैले, फेरि भन्दछु, रक्त दान जीवन दान ।
यो प्लाज्मा दान दिँदैमा तपाईंको शरीरमा भएका एन्टीबडी सकिँदैन । आफू त कोरोनाबाट बाँचियो के अरूलाई नबचाउने त ?
(लेखक ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलसँग सम्बद्ध छन् ।)
भक्तबहादुर शाही - May 15, 2021 0
दैलेख । आमालाई कुटपिट गरेको बदलामा बञ्चरो प्रहार गरेर दैलेखमा एक युवाले बुबाको हत्या गरेका छन् । डुंगेश्वर गाउँपालिका–६ माथिल्लो डुंगेश्वरबजारका २१ वर्षीय विकास...
दीपशंकर चौलागाई -
अशोक बम -
काठमाडौं । देशभर कोरोना संक्रमित र मृत्युदर उकालो लागेपछि अवस्था थप जटिल बन्दै गएको छ । अधिकांश अस्पताल कोरोना संक्रमितले भरिभराउ छन् भने अक्सिजन,...
डिजिटल प्लेटफर्म खोज्नुपर्ने सिनेकर्मीको भनाइ
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणका कारण १६ वैशाखदेखि काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकका विभिन्न स्थानमा लकडाउन सुरु भएपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ) यतीबेला डिजिटल माध्ययमबाटै भर्चुअल...
बेहुला बेहुलीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि गाउँ सील गरेर परिक्षण
संखुवासभा । संखुवासभा मादी नगरपालिका –३ का बेहुला बेहुलीलाई कोरोना संक्रमण भएको छ । मादी –३ का २५ बर्षीय विरेन्द्र कुमार मण्डल र २०...
धनगढी । कैलालीको भजनी नगरपालिका–१ को हो स्थानीय ४३ वर्षीय महिलाको मङ्गलबार बिहान कोरोना सङ्क्रमणका कारण ज्यान गयो । मृत्युको पीडा त छँदै थियो,...
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित केही जिल्लामा कोरोना संक्रमणको गति तीव्र रूपमा बढ्दै गएपछि निजीसहित सार्वजनिक सवारीमा फेरि जोर बिजोर प्रणाली लागु गर्ने तयारी...
काठमाडौं उपत्यकामा थप ३७७ जनामा कोरोना संक्रमण
प्रदेश ३ Sushila Bishwokarma - August 27, 2020 0
काठमाडौ । पछिल्लो २४ घण्टामा काठमाडौं उपत्यकामा ३७७ जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता प्राडा जागेश्वर. गौतमका अनुसार काठमाडौमा...
सूर्योदय नगरपालिकाका किसानलाई मोटरसहितको घाँस काटने मेसिन
प्रदेश १ Sushila Bishwokarma - August 19, 2020 0
इलाम । इलामको सूर्योदय नगरपालिकाले १४ वडाका ५६ जना पशुपालक किसानहरुलाई मोटरसहितको घाँस काटने मेसिन वितरण गरिएको छ । कृषिमा आधुनिकिकरण गर्दै उत्पादन लागत...
बिस्का : जात्रा नरोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
Breaking News राजधानी संवाददाता - April 7, 2021 0
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भक्तपुरमा मनाउने बिस्का: जात्रा नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बिस्का: जात्रा नगर्न बरू सामान्य तरिकाले मनाउन...
झडपमा घाइते भएका पूर्वमन्त्री झा र यादवसहित ४ जनालाई काठमाडौं रिफर
प्रदेश २ Sushila Bishwokarma - February 4, 2021 0
जनकपुरधाम । जनकपुरधाममा प्रहरीसंगको झडपमा घाइते भएका पूर्व मन्त्री रामचन्द्र झासहित चार जनालाई काठमाडौं रिफर गरिएको छ । नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समुहका नेता पुर्व मन्त्री रामचन्द्र...
सबै पास रद्ध, सरकारी र वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीलाई छुट्टै पास
प्रमुख Roshan Shrestha - May 12, 2020 0
काठमाडौं । विश्वभरी महामारीको रुप लिइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का संक्रमित नेपालमा बढ्दै गएपछि सरकारले लकडाउनमा थप कडाई गरेको छ । सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को...
संसद् विघटनविरुद्ध उत्रियो कांग्रेस
प्रदेश ३ Kumar Raut - December 29, 2020 0
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसद् विघटनविरुद्ध सडकमा निस्किएको छ । संसद् विघटनलगत्तै पदाधिकारी बैठक बसेर निर्णयको विरोध गरेको कांग्रेस विरोध प्रदर्शनमा...
भूमिहीन समस्याबारे मन्त्रीबाट जवाफ माग
प्रदेश ३ Sushila Bishwokarma - March 16, 2020 0
काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाका सांसदले सुकुम्बासी, भूमिहीन समस्या र अव्यवस्थित बसोबासबारे मन्त्रीको जवाफ माग गरेका छन् । सङ्घीय संसद, राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा सांसदले...
मास्क लगाउनै मान्दैनन् भीआईपी
भर्खरै Kumar Raut - October 12, 2020 0
काठमाडौं । गत वर्षको फागुनबाट नेपालमा कोरोना संक्रमण सुरु भयो । हाल नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख नाघिसकेको छ । संक्रमण बढ्दै जाँदा...
Editor-Picks Dhruba Lamsal - June 2, 2020 0
श्याम प्रसाद मैनाली - May 10, 2021
टेनिस रोका - May 11, 2021
कोरोना नियन्त्रणमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र सक्रिय
निराजन पौडेल - May 13, 2021